छ राजनीतिक दलको केन्द्र र प्रदेशमा नुवाकोटका ९५ जना - Khabar Page
कपिलदेव खनाल २६ पुष २०७८, सोमबार २१:१७ मा प्रकाशित
नुवाकोट (विदुर) । ठूला छ वटा राजनीतिक दलमा नुवाकोटबाट केन्द्रीय समिति र बागमती प्रदेश समितिमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरुको संख्या ९५ रहेको छ । छ वटै राजनीतिक दलमा नुवाकोटबाट चुनिएका नेताहरु केन्द्रीय समितिमा २० जना र बागमती प्रदेशमा ७५ जना छन् ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकिकृत समाजवादी र जनता समाज पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिमा नुवाकोटको उपस्थिति देखिएको छ । नेकपा एमालेको उप महासचिवमा नुवाकोटका छन् । अन्य पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य मात्रै छन् । त्यस्तै बागमती प्रदेश समितिमा नेकपा एमालेको अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष र राप्रपाको प्रवक्ता नुवाकोटका छन् । काँग्रेस, जसपा समाजवादीमा प्रदेश सदस्य मात्रै छन् ।
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिमा चार जना र बागमती प्रदेशमा पाँच जना गरी नौं जना नेताले नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिमा चार जना र प्रदेश कमिटिमा २९ जना गरी नुवाकोटका ३३ जनाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिमा दुई जना र बागमती प्रदेश कमिटिमा २४ जना गरी २६ जना नुवाकोटका नेता चुनिएका छन् । जनता समाज पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिमा दुई जना, संघीय परिषद्मा दुई जना र प्रदेश समितिमा पाँच जना गरी नुवाकोटबाट नौं जना नेता चुनिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्य समितिमा सात जना र प्रदेश समितिमा तीन जना गरी १० जना नुवाकोटका नेता चुनिएका छन् । त्यसै गरी, नेकपा एकिकृत समाजवादीको केन्द्रीय सदस्यमा एक जना र प्रदेश समितिमा १० जना गरी नुवाकोटका ११ जना नेताले प्रतिनिधित्व गरेका छन् ।
केन्द्रीय कार्य समितिमा नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरुको संख्या सात छ । जसमा नेकपा एमालेमा दुई जना, नेकपा माओवादी केन्द्रमा एक जना, राप्रपामा तीन जना, जनता समाज पार्टी नेपालमा एक जना छन् । काँग्रेस र एकीकृत समाजवादीमा नुवाकोटबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला छैनन् । केन्द्रीय समितिमा नुवाकोटबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलितको संख्या भने नुवाकोटबाट शुन्य रहेको छ । जनता समाज पार्टी नेपालको संघीय परिषद् सदस्यमा भने नुवाकोटका एक जना दलित छन् ।
नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित तीन जना र मनोनित एक जना गरी नुवाकोटका चार जना छन् । अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, बहादुरसिंह लामा तामाङ निर्वाचित भएका थिए । केन्द्रीय महामन्त्रीमा पराजित डा. प्रकाशशरण महत केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन् । काँग्रेसको बागमती प्रदेशमा पाँच जना निर्वाचित भएका छन् । जसमा प्रमोद रिमाल, बद्री मुडवरी, मणिराम केसी, बिन्दा थापा मगर, र धनकुमारी थापा ‘सरु’ छन् ।
नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटिमा नुवाकोटका चार जना छन् । बिष्णु रिमाल केन्द्रीय उप महासचिव र सदस्यहरुमा बिन्दा ढुङ्गाना, बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमिल्सिना निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
एमालेको बागमती प्रदेश अध्यक्षमा नुवाकोटकै केशबराज पाण्डे छन् । प्रदेश कमिटिका सदस्यहरुमा २८ जना छन् । बद्री मैनाली, नारायणप्रसाद खतिवडा, रामशरण प्याकुरेल, ठाकुर गजुरेल, राजेन्द्ररमण खनाल, नारायण बस्नेत, पूर्णलाल श्रेष्ठ, काशिराज अधिकारी, रमेशबहादुर वस्ती, बलराम आचार्य, बिजयसिंह लोप्चन छन् । त्यस्तै एमाले बागमती प्रदेशका अन्य सदस्यहरुमा सञ्जु पण्डित, आशामाया तामाङ, बासु कँडुवाल, जनार्दन भण्डारी, गोकर्णराज पाठक, गणेश श्रेष्ठ, अजितमान तामाङ, भोला सेढाई, मेञ्चुङ लामा, चेतनाथ अधिकारी, बिष्णु लोहनी, राजु लामा, बाबुराम लामा, मंगलमाया प्रजापती, सावित्री प्याकुरेल र श्रीमान् तामाङ छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यमा नुवाकोटका दुई जना छन् । हितबहादुर तामाङ र बिमला सुबेदी केन्द्रीय सदस्य छन् ।
माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश कमिटिमा भने नुवाकोटका उपाध्यक्ष सहित २४ जना छन् । रामप्रसाद ढुङ्गाना उपाध्यक्ष छन् । प्रदेश कमिटिका सदस्यहरुमा हिरानाथ खतिवडा, पुष्प लामिछाने, राममाया बोगटी, सुभद्रा नेपाल, कल्पना रिमाल, राजकुमार रेग्मी, केशव पुडासैनी, नबिन पुडासैनी, राजेन्द्र न्यौपाने, अर्जुनप्रसाद न्यौपाने, रामेश्वर खड्का, तेजबहादुर तामाङ, रत्न बिक, शिब खाती, लालबहादुर तामाङ, प्रमोदलाल तामाङ, सुभाष तामाङ, देबकी मिजार, सिता लामा, एलिसा थापा, गमला श्रेष्ठ, नम्बर शेर्पा र राजन गौतम छन् ।
जनता समाज पार्टी
जनता समाज पार्टी नेपालको केन्द्रीय सदस्य र संघीय परिषद् सदस्यमा नुवाकोटका दुई/दुई जना छन् । डा. भिमलाल तामाङ र जेसिका लामा केन्द्रीय सदस्य हुन् । संघीय परिषद् सदस्यहरु धर्मबहादुर गुरुङ्ग र राजन बमरेल छन् ।
जसपा नेपालको बागमती प्रदेश समितिमा नुवाकोटका पाँच जना छन् । ईश्वरकुमार राउत, केशब पुडासैनी, अजित तामाङ, महेन्द्र तामाङ र भगवान रानामगर छन् ।
राप्रपाका केन्द्रिय सदस्यहरु
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्य समितिमा सात जना छन् । भरतप्रसाद पाठक, दीपकुमार राई, नानीमैया आचार्य, अष्टमाया लामा, गंगामाया तामाङ, जनराज पाठक र झनक प्याकुरेल राप्रपा केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
राप्रपाको बागमती प्रदेश समितिमा प्रवक्ता सहित तीन जना नुवाकोटका छन् । बिष्णुप्रसाद सापकोटा राप्रपा बागमती प्रवक्ता, प्रदेश सदस्यमा शिबप्रसाद अधिकारी र श्रबणकुमार ढकाल छन् ।
नेकपा एकिकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिमा नुवाकोटबाट एक जना मात्रै सदस्य छन् । समाजवादीको केन्द्रीय सदस्य तथा पोलिटब्युरो सदस्यमा राजेन्द्रप्रकाश लोहनी छन् ।
समाजवादी बागमती प्रदेश कमिटिमा नुवाकोटका १० जना सदस्य छन् । सुर्यबहादुर कँडेल, केपी लामिछाने, श्रीकृष्ण खतिवडा, यमकुमार खाती, राम थापा, राजेश थापा, रामकुमार बस्नेत, केशब पाण्डे, श्रीमाया लामा र शिबकुमार लामा प्रदेश सदस्य छन् ।